Handball : misongadina ny ekipan’Ihorombe | NewsMada
Handball : misongadina ny ekipan’Ihorombe
Niditra teo amin’ny andro fahatelo, omaly, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, eo amin’ny taranja handball, sokajy zandriny «cadet» sy «junior», lahy sy vavy. Fihaonana tanterahina etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina. Anisan’ireo misongadina aloha, hatreto, ry zareo avy any Ihorombe. Porofon’izany, mitarika eo amin’ny «cadette» ny ASE, manana isa 8. Tamin’ireo lalao efatra nataony, samy nahazoany fandresena avokoa.
Mbola nanamafy izay maha lohany azy izay izy ireo, omaly, tamin’ny nandavoany ny Zanak’Ala avy any Farafangana, tamin’ny isa 10 noho 9. I Betroka kosa ? nanilika ny HBC Njatovo, tamin’ny isa 10 noho 7.
Ho an’ny “cadet” indray, samy nahazo fandresena avokoa ny HBCM sy ny Tam, izay samy avy any Ihosy. Ny Tam, nandresy ny Ascuf, tamin’ny isa tery 16 noho 15. Niady ny baolina ary nifanenjehana hatrany ny isa teo amin’ny roa tonta. Efa tany amin’ny segondra farany vao tafavoaka ny Tam. Mbola tamin’ny isa tery, 19 noho 18, ihany koa no nandavoan’ny HBCM ny Zanak’Ala.
Nisaraka ady sahala 25 noho 25 kosa ny ASS Atsimo Andrefana sy ny Tilty, avy any Atsinanana, ho an’ny “junior” lehilahy, vondrona “A”. Nomontsanin’ny Sofia Misôma, tamin’ny isa 22 noho 12, kosa ny HBCI Ihosy.
Hitohy, anio, ny fifanintsanana ka lalao 8 no voalahatra amin’izany.